5 Best Saffarada Day From Vienna Si Baro Austria | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Saffarada Day From Vienna Si Baro Austria
Vienna waa caan ah caga safarka, badanaa maxaa yeelay waa qurux badan waxayna tahay magaalo wax badan laga bixiyo
Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waa magaalo ku hareereysan meelo kale oo badan oo xiiso leh. Haddii aad haysato waqti safarka maalinta ka Vienna a, halkaas oo waa inaad jeedi dareenka? Waxaan helnay talooyin xoogaa hubaal ah fasax samee ee Austria ka badan oo isu. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ka heli kartaa si aad u aragto qaar ka mid ah meelaha laga yaabo in aadan haddii kale ka dhigi waqti ay ku soo booqdaan. Eeg liiska of our 5 Best Saffarada Day From Vienna Si Baro Austria waxaa laga yaabaa in aad jeceshahay!
1. Baro Austria – Hallstatt
Hallstatt waa qumman yahay safarka maalinta ka Vienna ah sababtoo ah ma aysan qaadan waqti aad u dheer si ay u sahamiyaan, iyo waxa ay gabi ahaanba waa cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay qaadashada tareen si Hallstatt, heli hore u socday ee subaxdii, si aad u yeelan doontaa waqti ku filan. Waa mid ka mid ah safarada maalin dheer ka Vienna, iyo qorshaynta wanaagsan waa muhiim. laakiin, mar aad tahay waxaa, waxaa jira wax badan oo ay ku raaxaystaan. tug, qaadashada sawiro, ama booqanaya boholaha barafka ee xilliga qaboobaha yihiin oo dhan doorashooyin fiican.
Munich in ay Tareenadu Hallstatt
Innsbruck in Tareenadu Hallstatt
Passau in Tareenadu Hallstatt
Rosenheim in Tareenadu Hallstatt
Salzburg si fudud yahay la heli karo tareen ka Vienna, waana mid ka mid ah safarada maalintii ugu mashquuliya. Tusaale ahaan, ee Salzburg, aad sahamin karaan xarunta magaalada taariikhiga ah leh dhismayaasha baroque ay qurux badan. Markaas waxaa jira Fortress Hobensalzburg ah, kaas oo ku siin doonaa view ugu wanaagsan ee magaalada.
Intaa waxaa dheer, waxaad booqan kari waayay guriga Mozart ee, hadda a museum iyadoo waxyaabo badan oo ay wax ku bartaan oo ku saabsan laxamiistaha ugu caansan. xitaa more, waxaad booqan kartaa cathedral Salzburg meesha la baabtiisay, ayuu.
3. Trip A Maalinta Si Lainzer Duur Park
Haddii aad raadinayso si aad u hesho magaalada ka fogayno safarka maalintii, aad heysato xiddigo badan oo. Midkood waa Lainzer Beerta Duurjoogta, taas oo aad ka heli karto ee Woods Vienna ee. Its dabiiciga ah u qurux badan oo leh geedkii iyo bjørk geedaha qadiimiga ah ka dhigi doonaa inaad dareentid sida aad u degay galay ekayd a.
In la soo dhaafay, meeshan ahayd caado ah ugaadhsiga jecel yahay kuwa gobta badan. maanta, ma waxaad u ugaadhsan karo, laakiin aad ku raaxaysan karaan wadooyinka hortayada qurux badan iyo sidoo kale view ka fiirinta Hubertuswarte ah.
Frankfurt inay Tareenadu Vienna
Just a 40 daqiiqadii safarka ka Vienna, waxaad ka heli kartaa jawharad u gudubno this - Laxenburg Castle. Meesha mar ahaa magaalada suuqa, laakiin hadda waxa ay u adeegtaa sida Intaa waxaa dheer ah picturesque in jiidashada Viennas. Tusaale ahaan, aad ku raaxaysan karaan mid ka mid ah ay maqaayado badan, beeraha iyo xitaa sunlit doontu ku soo baxay gal u gudubno,.
In u dhow ee Vienna, halkaas waa haybad badan a qalcaddii Dr Makumbe aad sahamin karaan. Kreuzenstein xusuusinayaa dad badan oo ka mid ah Hogwarts sixir, sababta oo ah spiers iyo dhisteen ay. Waa maxay more, waxay bixisaa qabanin, views breathtaking ee Woods Vienna iyo Danube. Intaa waxaa dheer, tuulada Leobendorf uu ku dhow yahay by, kaas oo noqon kara stop wanaagsan idiin safar maalin aad.
Ready in ay arkaan wax walba Vienna leeyahay in ay bixiyaan marka ay timaado safarada maalin? Iyadoo mid ka mid ah our 5 Best Saffarada Day From Vienna Si Baro Austria, safarkaaga noqon doona u qalantaa. Diyaari inaad ku raaxaysatid fasax iyo in la hubiyo in ay Ballansan Your Tigidhada in Tareenku waqtiga!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Best Saffarada Day From Vienna Si Baro Austria” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-vienna%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#traveleurope Daytrips eurotrip safarka tareenka travelaustria traveltips